Been Abuurkii Internetka ee Kooxda Jwxo-shiil, oo ay labo ka hadhay – Rasaasa News
Been Abuurkii Internetka ee Kooxda Jwxo-shiil, oo ay labo ka hadhay
Jan 21, 2011 Been Abuurkii Internetka ee Kooxda Jwxo-shiil, Eritrea, ethiopia, Ogaden, ogaden peace, ONLF, oo ay labo ka hadhay, Somali
Kooxda Janan-Jwxo-shiil [Maxamed Cumar Cisman] ee iyadu halkaas dhigtay ummada Somalida Ogadeeniya, ayaa waxay bilowday in ay kala dhuumato, ka dib kolkii ay ummadu ogaatay in waxa ay Internetka ku qori jireen oo dhan uu ahaa been iyo huuhaa.
Kooxda oo awal hore aad u isticmaali jirtay Alada Internetka oo ay aad u daawadaan dadka qurba joogta ah, ayaa waxay ku qori jireen wax uusan aqligaagu keeni karin oo runta ka fog. Waxay odhan jireen dadka ku nool gabalka Ogaden xabad looma quudho oo waa la marjiyaa, guryaha ayaa habeenkii dadka lagala baxaa oo waa la dilaa iyo waxyaabo kolka aad maqasho aad is odhan, aduunkan waxba kama qarsoonee meesha ay dhibaatadaasi ka jirto maxaa loo waayey in uu aduunku ka hadlo.
Dad magaalo degan waxaa dhab ah in uu wax ka dhex dhici karo, kolka ay is dacweeyaan waa xaqiiq in hadii uu meesha boolis joogo in la xidhi dadka dhibka gaystay. Kooxda Jwxo-shiil, hadii nin tuug ah uu Boolisku qabto waxay u badali jireen in dad la xasuuqay oo xabsiga laga buuxiyey sabab la,aan.
Maanta Qurba joogtii beenta laga gadi jiray waxay tageen degaanka Somalida Ogadeeniya, dil daayoo way soo dalxiiseen. Hadaba kolkii ay ku laabteen dalalkii ay ka yimaadeen ee ay warameen waxaa dirba Kooxda Jwxo-shiil, ka xidhmay labo bogg oo internet ah sida Ogadentoday.com iyo Hanqadh.com.
Mar la waydiiyey wiilshii qori jiray boggada xidhmay, maxaad boggaga u xidheen waxay sheegeen in awal horeba ay beentii qori jireen eeggana ay beentii soo xidhantay. Waxay sheegeen in kooxda ay hada u hadheen labo bogg oo ah Ogadennet.com iyo Qorahey.com oo dhawaan la xidhi doono, kolkii uu afku qalalay loona qoyn waayey wiilkii beenta ku qori jiray.
Waxaanu dhawaan idiin soo dayndoonaa been-abuurka TV Al-shabaaba [somali channel] iyo Bilaacanta, TV-gaas oo ah aalada kaliya ee maanta beenta u abuurta kooxda kala dhaqaaqday ee Jwxo-shiil.